I-ecommerce yentlalo nabani na?
NgoLwesihlanu, ngoJuni 8, 2012 NgeCawa, ngoSeptemba 8, 2013 Douglas Karr
Ngabantu abaninzi kuxhomekeke kuthungelwano lwentlalo kunye neeblogi zeendaba kunye nohlaziyo, kugxilwe ekubandakanyeni abathengi kunye nabathengi abanokubakho kwimidiya yoluntu. Nangona kunjalo, kwiinkampani, olo manyano lokuzibandakanya okanye ulwakhiwo lwebrand luhlala lusebenzisela ilize ukuba ekugqibeleni aluguqululi kwiingeniso ezongeziweyo.
faka Unyango, iqonga lokuqala lezorhwebo elisasazwayo eluntwini, livumela iinkampani ukuba zibandakanye abantu kwimidiya yoluntu, zisasaze iindawo ezihambelana nazo kunye neenethiwekhi zentengiso, kwaye zenze imali ngokwenza oko ngexesha elinye.
I-Moontoast ineMveliso ezi-3 eziNikezelwayo (Iinkcazo zivela kwindawo yazo):
Ivenkile ehanjisiweyo Indawo yokuThengisa iMoontoast yindawo yokugcina enokufakwa kuyo nayiphi na iwebhusayithi kwaye kwabelwane ngayo kwinethiwekhi yoluntu kunye ne-imeyile. Sakhe iVenkile ehanjisiweyo ukuvumela iimveliso, iimvumi, abapapashi, kunye nosaziwayo ukuba bandise ukufikelela kwabo kwi-eCommerce ngokuthatha izibonelelo ngokuthe ngqo kuluntu lwabo. Amava onke okuthenga kunye nokuthengiselana aqulathwe ngaphakathi kwevenkile, okwenza inkqubo yokuthenga ikhawuleze kwaye ibe lula.
Impembelelo yomoya -Impembelelo ye-Moontoast sisicelo se-Facebook esivumela abalandeli ukuba badlale, babelane, kwaye bathenge umculo kanye kwiphepha labalandeli likaFacebook. Insiza yaphefumlelwa yiVenkile yokuSasazwa e-Moontoast ephumeleleyo abaculi abanjengoTaylor Swift noReba abayisebenzisileyo ukwandisa ukuthengisa kwi-Intanethi. Nge-Moontoast Impulse senze ukuba izixhobo ezifanayo zifikeleleke kubo bonke amagcisa. Sisilumko, sinamandla, isisombululo sorhwebo lwentlalo nge-DIY.
Uhlalutyo lweMoast -I-Moontoast Analytics siseti eyomeleleyo- ayifumaneki nakweyiphi na iqonga lezorhwebo loluntu-elikunika umda wentengiso. Ukusuka kwintaka yamehlo ejonga imeko kunye neepateni kwimbono eneenkcukacha zokuba zeziphi iimveliso kunye neephakeji ezithengisa kakhulu, le datha ibonelela ngemibono ebalulekileyo eya kukunceda uhlaziye kwaye wenze ngcono imveliso oyinikezelayo-ibenze banqweneleke ngakumbi, babelane kwaye banenzuzo. I-Moontoast Analytics ithatha uqikelelo ekuchazeni ukuba zeziphi iintlobo zonikezelo ezinomdla kakhulu kubaphulaphuli bakho.
Ivenkile ehanjiswa yiMoontoast sisixhobo esivumela ii-brand ukuba zenze kwaye zisasaze iivenkile ezikwi-Intanethi kuthungelwano lwentlalo, iibhlog, iinethiwekhi zentengiso kunye neendawo zokudibana. Kodwa yintoni eyenza le mveliso ivele kumakhulu ezinye iimveliso ezifanayo kwezentengiso ezixineneyo? Impendulo ilele kukhetho lwangaphambili lwevenkile.
Ngaphandle kweVenkile yeNtlalontle esemgangathweni enokuthi ibethelelwe kuyo nayiphi na iwebhusayithi, Ivenkile yePopUp efanele amaphepha okufika kunye neebhena zentengiso, iguqulela enye into enokuba yeyenye intengiso, kwikhadi lokuthenga. Ivenkile yeeNtengiso ngokufanayo iguqula iyunithi yentengiso ibe yinqwelo yokuthenga. Olukhetho lubonelela ngamava amahle kubathengi njengoko oku kungaphazamisi umsebenzi wabo wokukhangela okanye ukungena kwindlela yabo yokuthenga.
Isixhobo soHlolisiso lwezeNtlalontle lwe-Moontoast sesona sixhobo sokuncedisa sigqibeleleyo sokuxhasa ezo ndawo zivenkile. Ngesi sixhobo, abathengisi bafumana ulwazi oluxabisekileyo kwindlela abaziphatha ngayo abathengi, yokwandisa izibonelelo kunye nokwenza ukuba kuthintelwe umthengi ekujoliswe kuye. Kwangokunjalo, isixhobo sikwenza kube lula ukulandela ukubandakanyeka kunye nokuthengiselana, ukulandelela iipateni kunye neendlela, ukuvumela uphawu ukuba lube kwindawo efanelekileyo kunye nendawo kunye nesibonelelo esifanelekileyo. Isixhobo sinceda ukulinganisa unxibelelwano lwasentlalweni, ubhengezo kunye nengeniso kunye kwaye inceda ukuvavanya uphawu lweROF okanye ukubuyisa kuyo Fans.
tags: Ivenkile ehanjisiweyomyoziUhlalutyo lweMoastImpembelelo yomoyauhlalutyo kwezentlaloezentengisoUhlalutyo lwe-ecommerce yentlalo